နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၉.၁၀.၂၀၂၀ – Sports A2Z
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၉.၁၀.၂၀၂၀
–	ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ချင်နေပြီး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို လက်ခံဆွေးနွေးခြင်းမရှိတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာကို အမြန်ဆုံးရောင်းချပစ်ဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေ အလိုရှိနေကြ။
–	အဲလက်စ် တဲလက်စ်နဲ့ ဒွန်နီ ဗန်ဒဘိခ်တို့ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ အတောင့်တင်းဆုံးလူစာရင်းကို ပုံဖော်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီး ကာဗာနီ ရောက်ရှိလာတဲ့ တိုက်စစ်မှာ အကောင်းဆုံး လိုက်ပါပံ့ပိုးနိုင်မယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ထား။
🇧🇪 1🆚0 🇨🇮
70' Eric Bailly cède sa place à Odilon Kossonou. pic.twitter.com/nlznxuaEIQ
— Les Ultras Ivoiriens 🇨🇮 (@les_ultras) October 8, 2020
–	လင်ဒီလော့ဖ်ရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ သူ့ထက် အနည်းငယ်ပိုသာမယ်လို့ ပရိသတ်တွေ ယုံကြည်နေခဲ့ကြတဲ့ အဲရစ် ဘိုင်လီကတော့ ဒဏ်ရာထပ်ရသွားပြန်ပြီဖြစ်ပြီး အိုင်ဗရီကို့စ်အသင်းတာဝန်မှာ ပေါင်နောက်ကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် အနားယူရဖို့ ရှိနေ။
Amad Traoré Diallo has completed today his medicals as new Manchester United player. Work in progress for his passport – he'll arrive in January as reported on Deadline Day. 🔴 #MUFC
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် ဆေးစစ်ခဲ့တဲ့ အတ္တလန်တာတောင်ပံကစားသမား အာမက် ဂျယ်လို ထရာအိုရေးကတော့ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး ဇန်နဝါရီမှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ ပတ်စ်ပို့ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေ။
–	အသင်းအတွက် အရန်ခုံမှာ အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ရှိခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ဆာဂျီယို ရိုမဲရိုးအတွက် ပရိသတ်တွေက အားနာနေကြပြီး တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ သူ့ကို မလေးမစား ဆက်ဆံတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ပြောင်းရွှေ့ခွင့် ပြုသင့်သလို ချန်ပီယံလိဂ်လူစာရင်းက ချန်လှပ်ခဲ့တာကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြ။
–	သူ့ရဲ့ စာချုပ်သစ်ထဲက အချက်အလက်အရ လာမယ့်နွေရာသီမှာ ပေါင် ၃၆ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်မယ့် နောက်ခံလူ ဒါယို အူပါမီကာနိုကို အချိန်ရောက်တာနဲ့ RB လိုက်ပ်ဇစ်ဆီ အမြန်ဆုံးလက်ဦးမှုယူပြီး ကမ်းလှမ်းနိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက် ပြင်ဆင်နေ။
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း ဒုဥက္ကဌ အက်ဒ် ဝုဒ်ဝဒ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကို တစ်လသာ အချိန်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ရလဒ်တွေ ပြန်ကောင်းမလာဘူးဆိုရင် စပါးစ်နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီနိုနဲ့ အစားထိုးဖို့ စီစဉ်ထား။
–	အဲလက်စ် တဲလက်စ်ကို ရောင်းချပေးထားတဲ့ ပေါ်တိုအသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာမှ ပိတ်သိမ်းမယ့် ပေါ်တူဂီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလ မကုန်ဆုံးခင် ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ်ကို ခေါ်ယူသွားလိုနေ။
–	ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးကို ပွောငျးရှခေ့ငျြနပွေီး စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ ကမျးလှမျးမှုတှကေို လကျခံဆှေးနှေးခွငျးမရှိတဲ့ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ ပေါ့ဘာကို အမွနျဆုံးရောငျးခပြဈဖို့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျပရိသတျတှေ အလိုရှိနကွေ။
–	အဲလကျဈ တဲလကျဈနဲ့ ဒှနျနီ ဗနျဒဘိချတို့ဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့ အတောငျ့တငျးဆုံးလူစာရငျးကို ပုံဖျောပေးနိုငျမယျ့သူတှေ ဖွဈကွပွီး ကာဗာနီ ရောကျရှိလာတဲ့ တိုကျစဈမှာ အကောငျးဆုံး လိုကျပါပံ့ပိုးနိုငျမယျ့သူတှဖွေဈတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှေ သုံးသပျထား။
–	လငျဒီလော့ဖျရဲ့ နရောမှာ အစားထိုးဖို့ သူ့ထကျ အနညျးငယျပိုသာမယျလို့ ပရိသတျတှေ ယုံကွညျနခေဲ့ကွတဲ့ အဲရဈ ဘိုငျလီကတော့ ဒဏျရာထပျရသှားပွနျပွီဖွဈပွီး အိုငျဗရီကို့ဈအသငျးတာဝနျမှာ ပေါငျနောကျကွောဒဏျရာရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အနားယူရဖို့ ရှိနေ။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအတှကျ ဆေးစဈခဲ့တဲ့ အတ်တလနျတာတောငျပံကစားသမား အာမကျ ဂယျြလို ထရာအိုရေးကတော့ အဆငျပွေ အောငျမွငျခဲ့တယျလို့ သိရပွီး ဇနျနဝါရီမှာ ငယျစဉျကတညျးက နထေိုငျလာခဲ့တဲ့ အီတလီနိုငျငံရဲ့ ပတျဈပို့ ရရှိနိုငျဖို့အတှကျ လုပျဆောငျနေ။
–	အသငျးအတှကျ အရနျခုံမှာ အမွဲတမျး အဆငျသငျ့ ရှိခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ဆာဂြီယို ရိုမဲရိုးအတှကျ ပရိသတျတှကေ အားနာနကွေပွီး တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ သူ့ကို မလေးမစား ဆကျဆံတာမြိုး မလုပျဘဲ ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ ပွုသငျ့သလို ခနျြပီယံလိဂျလူစာရငျးက ခနျြလှပျခဲ့တာကိုလညျး စိတျမကောငျးဖွဈနကွေ။
–	သူ့ရဲ့ စာခြုပျသဈထဲက အခကျြအလကျအရ လာမယျ့နှရောသီမှာ ပေါငျ ၃၆ သနျးနဲ့ ချေါယူနိုငျမယျ့ နောကျခံလူ ဒါယို အူပါမီကာနိုကို အခြိနျရောကျတာနဲ့ RB လိုကျပျဇဈဆီ အမွနျဆုံးလကျဦးမှုယူပွီး ကမျးလှမျးနိုငျဖို့ ယူနိုကျတကျ ပွငျဆငျနေ။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျး ဒုဥက်ကဌ အကျဒျ ဝုဒျဝဒျနဲ့ တာဝနျရှိသူတှဟော နညျးပွ ဆိုးလျရှားကို တဈလသာ အခြိနျပေးတော့မှာဖွဈပွီး လာမယျ့ နိုဝငျဘာလထဲမှာ ရလဒျတှေ ပွနျကောငျးမလာဘူးဆိုရငျ စပါးဈနညျးပွဟောငျး ပိုခကျြတီနိုနဲ့ အစားထိုးဖို့ စီစဉျထား။
–	အဲလကျဈ တဲလကျဈကို ရောငျးခပြေးထားတဲ့ ပျေါတိုအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျနမှေ့ာမှ ပိတျသိမျးမယျ့ ပျေါတူဂီ အပွောငျးအရှကေ့ာလ မကုနျဆုံးခငျ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျလူ ဂကျြဆီ လငျဂတျကို ချေါယူသှားလိုနေ။
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၉.၁၀.၂၀၂၀